RFA မြန်မာဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ ‘လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ’ (RFA) မြန်မာဌာနသို့ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
‘လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ’ (RFA) မြန်မာဌာနသို့ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
RFA ရန်ကုန်ရုံး။ Tel. 01 565 517 , 01 564 759
ဝါရှင်တန် ဒီစီ ရုံးချုပ်။
Radio Free Asia 2025 M Street NW, Suite 300 Washington DC 20036, USA
Tel. 202-530-4900 Fax 202-721-7431
ထိုင်းနိုင်ငံ ရုံးခွဲ။ RFA Burmese Service PO Box 1487, Nana Post Office Bangkok 10112, Thailand ဟောင်ကောင် ရုံးခွဲ။
PO Box 28840 Hong Kong
rJpm&if;trSm;rsm;ESif ywfouf aqG;aEG;vkdonfrSm ... 1) Printer xGufvmaom pm&Gufrsm;udk udktb,faMumifh rppfaq;ekdifMuoenf;/ aiGtiftm; r&Sd I vltiftm;rokHekdif I avm/ (taemufekdifiHawGrS a&G;aumufyGJtwGuf $20 million axmuf yHhxmaMumif; owif;rsmt& odxm;ygonf/ xdkodkUqdkvsSif aiGtiftm;&Sdygonf)
2) oHo& Nzpf &ef&SdonfrSm OD;wifat; onf computer eSifhywfouf I A[kokw &SdykHr&yg/ ,if;oHo,udk Oyrm wckNyqkd&vsSif .. .. udkZm*emudk electronic Nzifh axmifcscJhaom w&m;olMuD;onf computer rokH;bl;ovdk A[kokwr&Sdaom ,if;w&m;olMuD;u email vdyfpmawmifqkd&mwGif gmail udkay;vdkuf&m w&m;olMuD; \_ag owMuD; wkHU NyefrSK udk udkZm8em cH& bl;onf/
ကျ​နော်​ မင်းပြားမြို့နယ်​ ကပါ
မင်္ဂလာပါ RFA ကျွန်​​တော်​ကစစ်​​တွေကပါ RFA ကိုအား​ပေးပါတယ်​
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း စိစစ်ဖို့ ANP ပါတီ တောင်းဆို
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဂူဗိမာန် ရွှေရတု ကျင်းပ